Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dib ugu soo noqday Muqdisho +SAWIRRO | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dib ugu soo noqday Muqdisho +SAWIRRO
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dib ugu soo noqday Muqdisho +SAWIRRO
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda dalka ee Muqdisho.
Duqa Muqdisho waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan dowladda iyo masuuliyiinta gobolka oo uu horkacayo guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir.
Sidoo kale, guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo agaasimayaal ka tirsan dowladda hoose ee Xamar ayaa garoonka Aadan Cadde kusoo dhaweeyay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish.
Duqa Muqdisho Cumar Filish ayaa ku soo noqoshadiisa Caasimadda Muqdisho ku soo beegmeysa, kaddib markii xilka loo magacaabay maanta oo kale Sanadkii hore.
Guddoomiye Cumar Filish ayaa maalmahaan ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, halkaas oo uu uga qeyb gelayay shirka wadatashiga DF Somaliya, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
dib ugu soo laabasho